ब्लग मेरो लागि सबैले हेर्न सक्ने र पढ्ने सक्ने नोट कपि हो : रामकृष्ण पाैडेल - MeroReport
ब्लग मेरो लागि सबैले हेर्न सक्ने र पढ्ने सक्ने नोट कपि हो : रामकृष्ण पाैडेल
रामकृष्ण पाैडेल कविडाँडा,भरतपुरका स्थानियबासी हुन् । चितवन मेडिकल कलेजमा ल्याब टेक्निसियन पदमा कार्यरत रामकृष्णलाई समाजसेवामा विशेष रुचि छ । साहित्यमा पनि उत्तिकै रुचि राख्ने रामकृष्ण ब्लग लेखनमा पनि सक्रिय छन् । मेरो रिपोर्टको साप्ताहिक स्तम्भ साताका ब्लगरमा आज हामीले उनै रामकृष्ण पाैडेलसँग कुराकानी गरेका छाै । प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएको कुराकानी:
सोसियल मिडियामा म आफुलाई साहित्यको कुशल बिध्यार्थीको रुपमा मात्रा चिनाउँन चाहन्छु ।
म आफुलाई कहिल्यै निस्क्रिय राख्न सक्दिन त्यसो त ब्लगले आफुलाई निस्क्रिय बस्न पनि दिदैंन । ब्लगले नयाँ कुराको अध्ययन गराउन बाध्य पनि बनाउँछ । जुन बिषयवस्तुमा ब्लगिङ गर्ने हो त्यो बिषयवस्तुमा आफु आगाडी बढ्न सकिन्छ । आफ्नो बौद्धिकस्तर वृद्धि गर्न ब्लगिङले जीवनमा ठुलो भूमिका खेल्छ ।
ब्लगले आफ्नो एउटा सिङ्गो इतिहाँस निर्माण गर्छ । मैले प्रकाशन गर्नु भन्दा पहिला ब्लगमा राखेर मात्र बाहिर प्रकाशन गर्छु । ब्लग मेरो लागि सबैले हेर्न सक्ने,पढ्ने सक्ने नोट कपि हो ।
कसरी ब्लग सुरु गर्नुभयो ?
साथीहरुको ब्लग निकै हेर्ने गर्थे आफ्नो ब्लगमा मेरा रचनाहरु पोष्ट गरेर पाठक बढाउँथे । साथीहरुको ब्लग पनि राम्रो हुन्थ्यो अनि त्यसैबेला इच्छा जाग्यो । त्यसैबेला पोखराका मित्र अर्जुन जीलाई ब्लग बनाइदिन आग्रह गरे बनाइ दिनुभयो लगतै इन्टरनेटमा ब्लगका बारे अध्ययन पनि गरे त्यसपछि भने म आफैले अरु साथीहरुको पनि ब्लग बनाइदिन सुरु गरे ।
नेपालि साहित्यको उत्थान र स्रष्टाको सम्मानका निम्ति र त्यो संगै आफ्नो साहित्यको स्तर वृद्धिका निम्ति तथा आफ्ना लेख रचना भावना र निष्पक्ष समाचार सम्प्रेषण हुन सकोस भनेर अनि मेरो साहित्य सबैको नजरमा पार्नका निम्ति ब्लगिङ गर्छु ।
बिषयवस्तु सामान्य छ । समय र परिस्थितीको जुन माग हुन्छ त्यसैसँग चल्छु र त्यहि मागको परिपूर्ति गर्छु ।
तपाईले http://ramkrishnakapana.blogspot.com/ बाहेक अरु पनि ब्लगहरु चलाउनुहुन्छ कि?
मैले यो बाहेक अनलाइन खबर पत्रिका र गज़लका थुङ्गाहरु पनि चलाउने गरेको छु ।
ब्लगिङ गर्न खासै गार्हो भने छैन । तर आफुले किन गर्ने,केका लागि गर्ने, कसरि गर्ने भन्ने कुराको प्रष्ट ज्ञान हुन् जरुरी छ ।
पाठकबाट मैले नसोचेका प्रतिक्रियाहरु आएका छन् । त्यसमा पनि सबै सकारात्मक,प्रेरणात्मक र सम्मानका प्रतिक्रियाहरु झन् जिम्मेवार महशुस गर्छु ।
तपाईका चाहिँ ब्लगिङ बाहेक अरु रुचिका विषयहरु के के हुन?
ब्लगिङको अलावा छोटा, मिठा लेखहरु लेख्न र पत्रपत्रीका तथा अनलाईन मिडियाहरुमा प्रकाशित गर्न र समाजसेवा गर्न विशेष रुची लाग्छ ।
आफ्ना ती रुचिका विषयहरुलाई ब्लगमा कत्तिको समाबेश गर्नु भएको छ?
कत्तिको भन्दा पनि पहिलो प्राथमिकता नै आफ्नो रुचिलाई दिन्छु ।
ब्लग नै मेरो प्रगतिको एउटा माध्यम हो । हामीले ब्लग मार्फत नै गज़लका थुङ्गा कार्यक्रम संचालन गर्थ्यौ, पछि चालिस भन्दा पनि बढी ब्लग र वेबले पनि आफ्नो ब्लगमा राखेर साथ दिए । कार्यक्रम चर्चित भयो पत्रको ओइरो लाग्यो । हामि धेरै खुसी भयाै ।
हो पनि र हैन पनि । हो, किन भने ब्लगले कुनैपनी व्यक्तिका कुनैपनि विषयवस्तुमा आधारित स्वतन्त्र विचारलाई पदार्पण गर्ने काम गर्छ । सुचना सम्प्रेषण गर्न सजिलो हुन्छ । हैन, किन भने केहि ब्लगहरु यस्ता पनि हुन्छन् जसले विचार भन्दा पनि बढी अफवाह फैलाउँछन् । त्यस्ता ब्लगरु हेर्दा ब्लगको नै दुरुपायोग भए जस्तो लाग्छ ।